Pejy 2 - Ny helo WWE rehetra ao amin'ny sela PPV dia miorina amin'ny ratsy indrindra ka hatramin'ny tsara indrindra - Wwe
Ny helo WWE rehetra ao amin'ny sela PPV dia nilahatra hatramin'ny ratsy ka hatramin'ny tsara indrindra
# 7 Helo ao amin'ny sela 2013
Ny helo fanontana 2013 amin'ny sela dia natsangana manodidina ny fahefana mitazona an'i Daniel Bryan. Na dia nofantsihan'i Bryan aza i Randy Orton tamin'ny alina nandresen'ireo tompon-daka hahazoana ny tompon-daka tamin'ny WWE, dia namela ny anaram-boninahitra i Triple H noho ny isa haingana nataon'ny mpitsara. Tsy nisy vokany ny fifandonan'izy ireo tany an'ady. Shawn Michaels no mpitsara mpitsidika manokana noho ny fifandonana tao anaty sela. Tsara ny lalao fa ny sisa amin'ny karatra, afa-tsy ny lalao fanokafana dia tsy misy azo soratana ao an-trano.
Lalao marquee iray hafa tamin'ity hetsika ity i John Cena nanohitra an'i Alberto Del Rio ho an'ny tompon-daka mavesatra an'izao tontolo izao. Saingy tsy nahavita nanatitra koa izy io.
# 6 Helo ao anaty sela 2016
Sasha Banks vs. Charlotte no hetsika lehibe tao HIAC 2016.
Ny fanontana 2016 an'ny HIAC no HIAC voalohany indrindra taorian'ny nisarahan'ny marika. Sasha Banks sy Charlotte Flair dia niatrika ny hetsika lehibe indrindra tamin'ity hetsika ity, ary izy io no WWE PPV voalohany nisy hetsika lehibe ho an'ny vehivavy. Ny lalao tamin'ny alina dia ny lalao tompon-daka eran-tany teo amin'i Kevin Owens sy Seth Rollins. Io no helo faharoa tamin'ny fisehoan-javatra sela iray nanasongadinana ny helo 3 amin'ny lalao sela.
Ny ambin'ny karatra dia tsy misy dikany. Botka marobe no nampivandravandra ny hetsika lehibe. Tsara ny lalao Tompondakan'i Etazonia teo amin'i Rusev sy Roman Reigns. Ankoatr'izay, ny PPV dia par-par.
HIVERINA 2/5 MANARAKA
ahoana no ahafahanao mifankatia
ny fomba hamerenana ny fifandraisako
fomba hanentanana ara-tsaina bebe kokoa
ahoana no hahasambatra anao indray
hetsika tokony hatao rehefa mankaleo ianao